Kuita Brain Exercise - uye zvishoma nezve Doug | Martech Zone
Brain Exercise - uye zvishoma nezvaDoug
Chipiri, Gunyana 12, 2006 Muvhuro, Nyamavhuvhu 24, 2009 Douglas Karr
Chimwe chezvinhu chandinoda zvakanyanya nezvewebhu ndechekuti inodarika mutsetse pakati peunyanzvi nekuronga. Mumakore angu ekusekondari, ndaive anodisisa muimbi… ndichigara ndichidhonza chimwe chinhu kumwe kunhu. Mugore rangu repamusoro, ndakatora kosi yekukoreji muDrafting Drafting. Kunyora kwakatora zvishoma zverusununguko kunze kwepenzura yangu, asi ini ndainakidzwa chaizvo nekunyorwa kwekunyora. Ini ndakarwadzisa kirasi asi handina kumbozvitora kukoreji.
Panzvimbo iyoyo ndakabatana neNavy ndikave Electrician. Vanhu vazhinji veRot vanoshamisika kuti yangu yapfuura yakanditungamira kune Kushambadzira, Dhatabhesi Kushambadzira, Webhu Dhizaini, uye Webhu Dhizaini dhizaini ... asi kwaive kushanduka kwechisikigo. Kufunga uye kuranga kunodiwa mukushanda pamwe nemaindasitiri emagetsi nemagetsi michina zvakandipa kufunga kwakanakisa uye kugona kugadzirisa matambudziko. Izvi zvakazopedzisira zvaita kuti ndiende kukoreji yeElectronics Technology. Panguva iyoyo, ini ndakatanga kugadzirisa matambudziko nekugadzira manera logic zvirongwa muPLC's (Zvirongwa Zvinogadziriswa Zvine Mwero). Izvo zvakatungamira mukubatanidzwa kwePC, Kuronga, Network Kubatanidza, uye Dhatabhesi Kubatanidzwa.
Ndakawira murudo neese matekinoroji uye indasitiri yandakanga ndiri… iyo Pepanhau Indasitiri. Ini ndaida kubva kudivi reKugadzira bhizinesi kuenda kudivi reKushambadzira neKushambadzira bhizinesi… asi kana mumwe munhu akakuona uine yunifomu yebhuruu, zvakaoma kuwana basa reKushambadzira. Saka… ndakasimudza mabhiza nengoro ndikafambisa vana vangu vekuWest, ndichishandira Database Marketing firm iyo yakagadzira, yakavaka uye yakazadzisa Kushambadzira Dura Dzimba muNewpaperpaper Indasitiri. Raiva basa raifadza. Ini ndakashandawo nemamwe mapepanhau mahombe uye ini pachezvangu ndakagadzira mamwe mashandisiro makuru muindastiri.
Ini ndakaomerera neindastiri kweanopfuura makore gumi uye ndakazviitira ini pachangu. Ini ndakatodomwa muindasitiri semumwe wevakuru makumi maviri pasi pemakumi mana. Ini ndakanyorera maindasitiri akati wandei uye ndikaisa ruzivo rwangu mukushanda, ndichivaka yakatanhamara Dhatabhesi Yekutengesa danho repepanhau remuno. Shanduko mukutungamira ipapo yakaunza zvishoma zvekusimbiswa pakushambadzira kwedhatabhesi. Mapepanhau akange ave kumedzwa mumakore angu gumi nemakambani makuru, saka tarenda rezvemabhizimusi rakanga risiri chinhu chaungagone kushandisa papepa remuno. Ini ndakazofunga kusiya bepanhau, neindasitiri kumashure. Icho chaive chiitiko chakaoma. Neraki ndakawana kakusundidzira munzira yekubuda. 🙂
Gore rangu rinotevera ndakapedza kubatsira mamwe makambani kuvaka zvirongwa zvavo uye ini ndakazopedzisira ndawana gigi rakakura ExactTarget. Iyo inoshamisa kambani, imwe yeanokurumidza kukura makambani akazvimirira muUnited States. Vane chigadzirwa chakanakisa uye ndakadenhwa izvozvi kuti ndirambe ndichiita zvirinani.
Izvo dzimwe nguva hazvina kukwana, zvakadaro. Ndichiri kufara nezvekubatsira Iyo Indianapolis Colts, iyo Indianapolis Chamber of Commerce, kuitisa nekugadzira tani yenzvimbo dzehama neshamwari, kutora chikamu muzviitiko zveKushambadzira kwematunhu, uye kutora matambudziko matsva. Ini ndakabatsira kuvhura Ini Sarudza Indy!, saiti-midzi saiti uko vanhu vanogona kutaura kuti sei vachisarudza Indianapolis. Iyo saiti iri kuwedzera kukurumidza. Ndiri kushanda zvakare kuvhura rangu bhizinesi, Compendium Software, nemumwe mudiwa wandiri kuisa blogging yangu, tekinoroji, uye ruzivo rwekushambadzira kushanda. Ini ndinoda kushanda nekukurumidza uye nehasha kumhanya uye ndinoda kushanda nevanhu vane 'vanogona kuita' maitiro.
Ndinonakidzwa nekushandisa 'huropi hwangu hwekuruboshwe' uye kuvaka mifananidzo ndichishandisa Photoshop uye Illustrator. Zvinotora zvishoma zvekugadzira. Manheru ano, ini ndashanda pane logo yechikwata chemuno, Rok Hollywood. Ndakatumira izvi kwavari rinenge awa rapfuura. Ndiri kuzomboidzokorora kashoma zvichienderana nemhinduro yavo ... asi sezvamunoona, ndiri kunakidzwa:
Chinokosha ndechekuti ini ndine makumi matatu nemasere uye handizive zvandiri kuda kuva kana ndakura! Ini ndoziva kuti ini ndakanaka kwazvo kutsvaga hunyanzvi mhinduro kumatambudziko akaoma, uye kudzidzisa vanhu pairi. Ndine chido chechokwadi chehunyanzvi. Ini handina moyo murefu kune vanhu vanopa zvikonzero, asi ndinoda kubatsira vanhu vanokumbira rubatsiro. Hapana chinhu chinondigutsa kupfuura kunyemwerera pachiso chemutengi.
Ndiri Mambo wezvese maTrade (ini ndashanduka kubva kuna Jack) asi ini ndichiri nyanzvi pane chero. Handikwanise kumira mune zvematongerwo enyika, kunyanya kuhofisi. Ini handifarire kushanda pazvinhu zvisina zvibodzwa zvinoverengeka. Ndinovenga misangano kwatinosangana tisina chinangwa (ndinoratidza kunonoka uye ndinounza PDA yangu kuti ndikwanise kuita email). Ini ndoda kushanda kunonoka… nguva yangu inobudirira kazhinji iri pakati pegumi kusvika pakati peusiku. Uye ini ndinoda kurova ngonono kanokwana makumi maviri mangwanani.
Zvese izvi uye ini ndiri single Baba! Nguva nevana vangu yakanaka. Isu tichiri kuona mabhaisikopo patinokwanisa uye tinotandara zvakanyanya pamwe chete. Vese vana vangu vanoshamisa. Oo, ndiri kutarisira yangu yekutanga 'kofi date' mune yakati rebei vhiki ino… icho chikamu chehuropi hwangu chandisina kumboshandisa mune yakati rebei saka dai ini rombo rakanaka!
Zvakwana nezvangu! Nguva yekurara.
Kufuridzirwa: Tom Peters
Sep 13, 2006 na5: 21 PM
Ini ndaive baba vasina murume kune vazhinji vevakomana vangu vakuru hudiki. Icho chaive chikamu chakanyanya kushata nezvekurambana - kusaona vakomana vangu kwenguva yakareba. Iye zvino vese vakura, uye ini ndinovaona kunyangwe vashoma. Koshesa nguva.
Sep 13, 2006 na5: 27 PM
Ini chaizvo ndine yakawanda nguva navo, Sterling. Ndine kodzero yekuchengeta vana. Chimwe chezvikonzero chandakasarudza midwest ndechekuti ivo vaone zvakawanda zvaAmai vavo, avo vakaroorwazve uye vanogara muLouisville. Handina chokwadi nezvandaizodai ndisina ivo!
Ndinobvuma zvakare: Kurambana. Zvinotyisa kune wese munhu anobatanidzwa.